United States Investment Corporation monitoring Zimbabwe situation - NewZimbabwe.com United States Investment Corporation monitoring Zimbabwe situation - NewZimbabwe.com
THE U.S. government’s Overseas Private Investment Corporation (OPIC) says it is closely monitoring the political situation in Zimbabwe as it rolls out an initiative which will mobilise more than $1 billion to projects that support transportation, communications, and value chains in Africa over the next three years.
“We are following that (developments in Zimbabwe) very closely,” said Ray W. Washburne, the President and CEO of OPIC.
“We currently have two projects in Zimbabwe…the last deal we did – the mortgage company – was in 2016, so we’ve been there recently, but we are studying the political situation there very closely.”
“There are endless possibilities to link Zimbabwe’s vast natural resources and the United States direct capital investments,” Simon Khaya Moyo, Acting Foreign Affairs Minister told delegates attending the Fourth of July commemorations on Thursday. Moyo said Zimbabwe had “changed those aspects of our investment laws to be more attractive and protect foreign direct investments. Investors are henceforth free to deploy their capital as they desire.”